Warka - Xisaabinta Iftiinka: Warshadaha isgaarsiinta indhaha ayaa noqon doona kuwa ugu horreeya ee ka soo kabanaya COVID-19
Bishii Meey., 2020, LightCounting, oo ah hay'ad caan ku ah cilmi baarista suuqa isgaarsiinta indhaha, ayaa sheegtay in marka la gaaro sannadka 2020, xawaaraha horumarka ee warshadaha isgaarsiinta indhaha uu aad u xoogan yahay. Dhamaadka 2019, dalabka DWDM, Ethernet, iyo wireless fronthaul ayaa kordhay, taasoo keentay yaraanta silsiladaha saadka.
Si kastaba ha noqotee, rubacii ugu horreeyay ee 2020, COVID-19 faafa ayaa ku qasbay warshadaha adduunka oo dhan inay xirmaan, cadaadiska silsiladda sahayda ayaa kor ugu kacay heer cusub oo cusub. Inta badan alaab-qeybiyeyaasha waxay soo sheegaan dakhliyada ka hooseeya inta laga filayo rubuca hore ee 2020, rajooyinka laga qabo rubuca labaadna aad looma hubo Warshadda Shiinaha ayaa dib loo furay horaantii bishii Abriil, laakiin inta badan shirkadaha Malaysia iyo Filibiin wali way xirayaan, shirkadaha Yurub iyo Waqooyiga Ameerika ayaa hadda bilaabay inay shaqadooda dib u bilaabaan. LightCountin wuxuu rumeysan yahay in baahida hadda loo qabo isku xirnaanta indhaha ee shabakadaha isgaarsiinta iyo xarumaha xogta ay xitaa ka xoog badan tahay dhammaadka sannadka 2019, laakiin qaar ka mid ah mashaariicda dhismaha shabakadda iyo xarunta xogta ayaa dib u dhacay cudurka aafada awgeed. Alaab-qeybiyeyaasha moobiilka ma awoodi doonaan inay la kulmaan qorshahoodii wax soo saar ee asalka ahaa sannadkan, laakiin hoos u dhaca ba'an ee qiimaha wax soo saarka ayaa laga yaabaa inuu hoos u dhaco sannadka 2020.
LightCounting waxay rajeyneysaa in haddii dhammaan warshadaha ay dib u furmaan qeybta labaad ee sanadkan, qeybta muraayadaha iyo qeybiyeyaasha moodeelku waxay dib u bilaabi doonaan wax soo saar buuxa rubuca afaraad ee 2020. Waxaa la filayaa in iibka mootooyinka muraayadaha ay si dhexdhexaad ah u kici doonaan sanadka 2020 ayna sii kordhi doonaan 24% illaa 2021 si loo daboolo baahida loo qabo ballaadhin ballaadhan oo loogu talagalay codsiyada.
Intaa waxaa sii dheer, oo ay waddo dhismaha 5G ee dardargelinta Shiinaha, iibinta qalabka muraayadaha indhaha ee wireless-ka iyo dib-u-dhaca ayaa kor u kici doona 18% iyo 92%, siday u kala horreeyaan, taas oo weli ah bartilmaameedka sanadkan. Intaa waxaa dheer, iibinta alaabada FTTx iyo AOCs ee qaybta isdhaxgalka indhaha, oo ay wadaan Shiinaha, waxay ku kori doonaan laba lambar illaa 2020. Ethernet iyo saamiga suuqa DWDM waxay dib u bilaabi doonaan kobaca laba-godka ah ee 2021.